Vaovao - Fetin'ny Reny
Ohabolana jiosy: Tsy afaka na aiza na aiza Andriamanitra ka natao reny.
Fankalazana fahagola ny maha-reny
Rhea, Renin'ireo andriamanitra grika
Nankalaza fety ho fanomezam-boninahitra ny maha-reny ny olona tany amin’ny kolontsaina fahiny maro, natao ho andriamanibavy.Ireto misy vitsivitsy amin'ireo:
Ny Grika fahiny dia nankalaza fety ho fanomezam-boninahitra an'i Rhea, renin'ireo andriamanitra, anisan'izany i Zeosy.
Nankalaza fety ho fanomezam-boninahitra an’i Cybele, andriamanibavy reny, ny Romanina fahiny.
Any amin'ireo Nosy Britanika sy Eorôpa Celtic, dia nomem-boninahitra tamin'ny fetin'ny reny lohataona ny andriamanibavy Brigid sy St. Brigid nandimby azy tatỳ aoriana.
Nohajaina ny maha-reny amin’izao andro maoderina izao
Fetin'ny renydia tsy ankalazaina amin'ny andro iray eran'izao tontolo izao, ohatra, any Amerika ny Fetin'ny Reny dia mitranga amin'ny Alahady faharoa amin'ny volana Mey raha any Grande-Bretagne kosa dia omena voninahitra ny Alahady fahefatra amin'ny Karemy (Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Karemy dia jereo ny Karemy ao amin'ny " Diksionera Paska” na Karnavaly ao amin’ny “Teny & Tantara”).
Fetin'ny Reny any Grande-Bretagne (21 martsa 2006)
mofomamy simnel, mofomamy voankazo manankarena indraindray rakotra paty amandy
Nankalazaina tany Grande-Bretagne ny Alahadin’ny Reny, nanomboka tamin’ny taonjato faha-17.
Nanomboka tamin’ny andro iray ahafahan’ny mpianatra sy ny mpanompo nody any an-trano ny andro hitsidihana ny reniny.Tamin'ny fomba mahazatra, nody ny lehilahy nitondra fanomezana “mofomamy reny” — karazana mofomamy voankazo na mofomamy feno voankazo fantatra amin'ny anarana hoe mofomamy simnel.
Fetin'ny Reny any Amerika (14 Mey 2006)
Misaotra an'i Anna M. Jarvis, lasa fety ofisialy any Etazonia ny Fetin'ny Reny.
Herintaona taorian’ny nahafatesan’ny reniny tamin’ny 9 May 1905, dia nanatrika fotoam-pivavahana fahatsiarovana tao amin’ny fiangonany i Anna M. Jarvis.Nentanin’ny aingam-panahy avy amin’ny fanompoam-pivavahana izy, ka nihevitra fa ho mahafinaritra raha manokana fotoana hanomezam-boninahitra manokana ny reniny ny olona.Avy eo, nanomboka nampiasa ny sasany tamin’ny lovany ilay zanany vavy mba hampiroboroboana ny andro iray izay hanomezam-boninahitra ny reny rehetra.
Nanao fampielezan-kevitra nanoratra taratasy ho an'ny minisitra, mpandraharaha ary mpanao politika izy sy ny hafa mba hanorina fetim-pirenena ho an'ny reny.Nahomby izy ireo tamin’ny farany.Ny Filoha Woodrow Wilson, tamin'ny 1914, dia nanao ny fanambarana ofisialy nanambara ny Fetin'ny Reny ho fankalazana nasionaly izay hatao isan-taona amin'ny Alahady faha-2 Mey.
Carnation: mariky ny fetin'ny reny
Jarvis no niandohan'ny fanao amin'ny fanaovana carnation amin'ny fetin'ny reny satria ny carnation no voninkazo ankafizin'ny reniny.
Ny carnation mavokely dia fanomezam-boninahitra ny reny velona ary ny carnation fotsy dia fahatsiarovana ny reny maty.
Fotoana fandefasana: Jan-11-2022
Vokatra vaovao, Fanomezana fialantsasatra, Kilalao fanomezana, Custom Hat Hat, entana fialan-tsasatra, satroka ririnina,